Teny nalaina tena tsara indrindra momba ny fitiavana amin'ny maha-horonan-tsary
Miaraka aminay ianao dia hahita ny teny faran'izay tsara indrindra momba ny fitiavana, voalahatra araka ny abidia ary aseho mazava ho anao. Ireto nalaina manaraka ireto momba ny fitiavana dia mety ihany koa ho toy ny lahatsoratra miarahaba amin'ny karatra fitsingerenan'ny andro nahaterahana na ny tapakila valisoa amin'ny fetin'ny mpifankatia ary koa ho an'ny mailaka fiarahabana na hafatra Whatsapp.
Teny nalaina momba ny fitiavana
Mikaroha amin'ny alàlan'ny topy maso ny teny miisa tsara momba ny fitiavana. Vakio ny fahendrena fitiavana mahafinaritra avy amin'ny mpanoratra isan-karazany amin'ny vanim-potoana samihafa.
Teny nalaina momba ny fitiavana sy ny fitiavana - © JackF / Adobe Stock
Oh, tsy misy fitiavana, ny fo dia mijanona ho toerana foana ao amin'ny fahasambarana lehibe indrindra. Anna Louisa Karsch
Ny lesoka rehetra ataon'ny olombelona dia vokatry ny tsy fitiavana. Alfred Adler
Ny fanekempihavanan'ny fitiavana fanahy mahafinaritra dia matetika atao amin'ny fotoana voalohany. Christoph Martin Wieland
Ny filan'ny fitiavana miaina rehefa mandeha ny fotoana. Ida Countess von Hahn-Hahn
Ny fahagagana lehibe indrindra dia ny fitiavana. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
Ny fifandraisana amin'ny fitiavana dia tsy noforonina tampoka fa mampiseho fiomanana lava. Ny fifamatorana erotika eo amin'ny olona dia misy foana, saingy misy fepetra takiana mba hahitana azy ho azo tsapain-tanana sy hita ho fitiavana. Alfred Adler
Ny fitiavana dia mampifandanja ny zava-drehetra. Albert Lortzing
Ny fitiavana dia fahafinaretana amin'izay tsara; ny tsara ihany no anton'ny fitiavana. Ny hoe tia dia midika hoe te hanao soa olona iray. Thomas Aquinas
Ny fitiavana no fijerin'ny fanahy. Simone Weil
Ny fitiavana no faniriana hotiavina. Jean Giraudoux
Ny fitiavana dia lamba volavolan-javaboary namboarina ary namboarina ny volavola. Voltaire
Ny fitiavana angamba no fiezahana farany avo indrindra ataon'ny natiora hitarika ilay olona hivoaka amin'ny tenany ho amin'ilay iray hafa. Amin'ny faniriana no tadiaviko hisintona ahy ilay zavatra, fitiavana no itiavako azy. José Ortega y Gasset
Ny fitiavana dia mitondra ny fanahy rehefa mitondra ny vatana ny tongotra. Catherine of Siena
Mandresy ny zava-drehetra ny fitiavana ary miankohoka amin'ny heriny isika. Virgil
Ny manafina amin'ny fitiavana indraindray dia toa mamitaka mitovy amin'ny fahamarinana. Molière
Ity no fiandrasana voalohany ny mandrakizay: manana fotoana hitia. Rainer Maria Rilke
Ny indray mitete fitiavana dia sarobidy kokoa noho ny gony volamena iray manontolo. Friedrich von Bodelschwingh
Tazomy eo am-pelatananao ny olon-tiana iray! Ity no fahasambarana farany ho an'ny olombelona, ​​Guy de Maupassant
Ny fitiavana dia tsy mba toy ny fitiavana hafa. Eduard Graf von Keyserling
Fitiavana mieritreritra ny farany tsy natomboka. Alexander Engel
Ny hoe tia olona dia midika hoe mahita azy araka ny namboarin'Andriamanitra azy. Fyodor Michailowitsch Dostoevsky
Misy lavaka mangitsokitsoka tsy azon'ny fitiavana resahina, nefa afaka milentika ao anatiny! Honoré de Balzac
Tsy misy fonja ratsy noho ny tahotra sao handratra olon-tiana. Rainer Maria Rilke
Tsy misy tsara noho ny tiana, tiana ho an'ny tenany manokana na koa na eo aza ny tenanao. Victor Hugo
Misy hadalana foana ao anaty fitiavana. Fa misy antony foana ao amin'ny hadalana. Friedrich Wilhelm Nietzsche
Ny fitiavana dia toy ny amin'ny zavamaniry: raha maniry hijinja fitiavana ianao dia tsy maintsy mamafy fitiavana. Jeremias Gotthelf
Aza mifaly loatra fa tiana ianao toy izay hitiavanao azy. Johann Kaspar Lavater
Ny fitiavana ny ankamaroan'ny hadalana amin'ny fiainana. Alexander Engel
Tsy manana fananana masina kokoa eto amin'ity tontolo ity aho noho ny fananana olon-tiana. Frank Wedekind
Tsy tiako ny fitiavana tia amin'ny teny. Sophocy
Te ho tiavina aho na te ho takatra. Iray izany. Bettina von Arnim
Ny elatry ny halemem-panahiko dia mandalo anao moramora. Rainer Maria Rilke
Ny fitiavana no zavatra rehetra mampitombo, manitatra, manankarena ny fiainantsika. Aorian'ny fiakarana sy fidinana rehetra. Ny fitiavana dia tsy misy olana toy ny fiara. Ny kitapom-batsy sy ny mpandeha ary ny arabe ihany no olana. Franz Kafka
Ny fitiavana dia làlan'Andriamanitra amin'ny olona ary ny làlan'ny olona mankany amin'Andriamanitra. Johannes von Kastl
Ny fitiavana dia tononkalon'ny fahatsapana. Honoré de Balzac
Ny fitiavana dia voankazo masaka irery, na dia tsy misy tara-masoandro aza. George Payne Rainsford James
Ny fitiavana sy fahatokiana no tsara indrindra karakarainay! Karl August Varnhagen von Ense
Tsy hoe tia zavatra fotsiny ianao satria tsara tarehy, fa lasa tsara tarehy koa satria tianao. Robert Musil
Tsy tianao ny ray, reny, vady na zanaka, fa ny fahatsapana mahafinaritra ataon'izy ireo ho anay. Georg Christoph Lichtenberg
Nihaona tamina tovolahy tena mahantra aho teny an-dalana izay nifankatia. Efa tonta ny satrony, tonta ny palitao; Nandalo ny kirarony ny rano. Saingy nifindra tao amin'ny fanahiny ny kintana. Victor Hugo
Tsy heverina fa manavotra an'izao tontolo izao, fa ny fitiavana. Manfred Kyber
Tsy ny fitiavana raisintsika no manafana ny fo fa ny fitiavana omentsika. Otto von Leixner
Izy irery no zavatra tia zavatra. Mitovy ny hoe tsinontsinona ary ny mitia tsy misy. Ludwig Feuerbach
Ny fitiavana madio dia mahatonga ny nofinofin'ny fiainana ho fahamarinana. Johann Kaspar Lavater
Ny masoandro dia tsy afaka tsy misy famirapiratana, ny olombelona tsy afaka tsy misy fitiavana. Johann Wolfgang von Goethe
Raha misy lehilahy tia ary tiana tsy misy fitaomana na fahaizana, na dia ireo andriamanitra aza dia mitsiriritra ny fahasambarany! Claude Anet
Izay manantena fisaorana noho ny fitiavany dia tsy tia. Heinrich Wolfgang Seidel
Izay tia, izay manana ny herin'ny fitiavana, dia tsara fanahy ihany koa, ary ho lozabe izany raha tsy izany. Theodor Fontane
Te ho tiavina ve ianao, ry malala! Hekaton of Rhodes
Samy mifampiasa isika rehetra ary miantso azy io hoe fitiavana. Tennessee Williams
Raha voajanahary ny fitiavana dia misy valiny ao aminy. Marie Louise avy amin'i François